Barnaamijka HOME - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kaabayaasha Dhismaha|Housing|Sanduuqa Amaanada Guriyeynta (HTF)|Barnaamijka GURIGA
Hormarinta Barnaamijka Kireynta Guriga
Waaxda Guriyeynta iyo Hormarinta Magaalada (HUD) Barnaamijka Hormarinta Kireynta HOM waa barnaamij deeq lacageed oo loo adeegsado in lagu ilaaliyo loona abuuro guryo qiimo jaban qoysaska danyarta ah HUD waxay u qoondeysaa lacagaha HOME-ka dowlad-goboleedyo iyo degmooyin gaar ah, oo loo yaqaan Xuquuqda Ka-Qaybgalka HOME
Barnaamij guryeyn oo la awoodi karo oo federaal ah oo loogu talagalay in loogu adeego shakhsiyaadka iyo qoysaska dakhliga soo gala ama ka hooseeya boqolkiiba 30 boqolkiiba dakhliga dhexdhexaadka ah ee deegaanka ayaa ah Sanduuqa Guryeynta Qaranka ee Guryaha (NHTF). Wax badan ka baro NHTF.
Barnaamijka Hormarinta Guryaha ee Washington
Waaxda Ganacsiga (Ganacsiga) waxay maamushaa barnaamijka Hormarinta Kireynta HOME ee gobolka. HOME horumarinta kirada waxaa la siiyaa ururada aan macaash doonka ahayn, maamulada guryaha, iyo dawladaha hoose iyo qabaa'ilka iyada oo loo marayo nidaamka codsiga Sanduuqa Guriyeynta Guriyeynta (HTF).
Barnaamijka HOME ee ganacsiga waxaa xukuma Qorshaha Iskujira iyo Qorshe Hawleedka.
Guga kasta waxaa la soosaaraa Qorshe Hawleed sanadle ah oo lagu qeexo sida gobolku u isticmaali doono qoondeynta sanadlaha ah ee lacagta HUD si loogu daboolo baahiyaha guryaha la awoodi karo iyo horumarinta bulshada. Qorshooyinka Waxqabadku waa wax-ka-beddelka sanadlaha ah ee Qorshaha Iskujira ee shanta sano ah wuxuuna ka kooban yahay dhammaan barnaamijyada HUD, oo ay ku jiraan HOME.
2020-2024 Qorshaha Iskujira
Qorshe hawleedka 2021
Guri caawinta guryaha la kireysto waa inuu waafaqa xadeynta kirada ee dejisa oo daabacda sanad walba HUD. Shuruudaha xaq u yeelashada dakhliga qoysku way kala duwan yihiin waxayna kuxirantahay howlaha HOME, laakiin waxay bartilmaameedsadaan qoysaska dakhligoodu aadka u hooseeyo (in ka yar boqolkiiba 50 meel dhexaadka).
Qorshaha Iskujira ee Gobolka Washington wuxuu cadeeyaa howlaha HOME ee ay maalgeliso gobolka hadda oo ay ka mid yihiin:
Daryeelka iyo horumarinta guryaha kirada ee dakhligoodu hooseeyo
Kaalmada kireysiga ee ku saleysan (TBRA)
Buug -gacmeedyada GURIGA
Laba buug -gacmeed oo cusub ayaa hadda loo heli karaa barnaamijyada HOME iyo National Fund Fund Fund ee ay maamusho Waaxda Ganacsiga.
Ganacsiga, isaga oo kaashanaya la -taliyaha khabiirka la -talinta barnaamijyada federaalka, ayaa u sameeyay buug -gacmeedyada labada barnaamij ee federaalka. Buug -gacmeedyadu waxay caddaynayaan barnaamijka iyo shuruudaha u -hoggaansanaanta barnaamijyada HOME iyo National Fund Fund Fund labadaba.
Buugga Tilmaamaha Barnaamijka - wuxuu bixiyaa aragti ku saabsan ujeeddada barnaamijka guud, habka codsiga, iyo shuruudaha maalgelinta.
Buug -gacmeedka Maareynta Kirada - wuxuu bixiyaa faahfaahin ku saabsan u hoggaansanaanta iyo shuruudaha warbixinta, oo ay ku jirto ballaarinta U hoggaansanaanta iyo Maareynta Hantida ee barnaamijyada.
Ururada Horumarinta Guriyeynta Bulshada (CHDOs)
HUD waxay ubaahantahay in awoodaha kaqeybgalaya (PJs) ay udiyaariyaan ugu yaraan 15% maalgalintooda HOME guryaha loogu talagalay horuumarinta, lahaanshaha, ama ay kafaala qaadaan Ururada Horumarinta Guriyeynta Bulshada (CHDOs). CHDOs waa nooc gaar ah oo urur samafal ah oo lagu qeexay Sharciga Kama-dambeysta ee Guri (24 CFR Qaybta 92).
HOME & CHDO waxay codsaneysaa codsiyo maalgelin la heli karo inta lagu gudajiro Sannadlaha HTF ee Dhaqaalaha Wareegga ah, oo guud ahaan lagu dhawaaqo xagaaga. Si aad u aragto fursadaha maaliyadeed ee jira, fadlan booqo Dalbashada Sanduuqa Amaanada Guriyeynta.
2020 Codsiga Shahaadada CHDO
Foomka Aqoonsiga CHDO 2020
Abriil 5 - 9, 2021 waxay ahayd Toddobaadkii Horumarinta Bulshada Qaranka
Toddobaadka Horumarinta Bulshada Qaranka diiradda saaraysa maxalliga, iyo sidoo kale heer qaran, fiiro gaar ah ee ku saabsan barnaamijyada 'Community Development Block Grant' (CDBG) iyo HOME
Toddobaadku wuxuu bixiyey cod midaysan oo taageero ah iyo dadaallada sii socda ee looga faa'iideysanayo awoodda ka-qaybgalka aasaasiga si wax loogu baro xubnaha Koongareeska iyo bulshada guusha barnaamijyada iyo qiimaha ay u leeyihiin bulshada maxalliga ah.
Fadlan fiiri hadalada Xoghayaha HUD Fudge ee Toddobaadka Horumarinta Bulshada Qaranka halkan.
Buugga Tilmaamaha Barnaamijka HOYGA & NHTF (PDF)
Buug -gacmeedka Maareynta Kirada HOME & NHTF (PDF)
Xadka Xaddiga Kaabista ee Unugga Ugu Badan (PDF)
Xaddidyada Kireynta & Dakhliga HTF / HOME / NHTF (PDF)
Buug-tilmaameedka Cashuurta Guriyeynta Dakhliga Hooseeya (PDF)
Tilmaamaha Guri ee Milkiilayaasha Hantida (PDF)
Kaalmada kireysiga ee ku saleysan kireystaha (TBRA) (Websaydh)
HUD Qaybta 3 Khayraadka
Qaybta 3aad HOOYADA & Nidaamyada & Nidaamka NHTF (PDF)
Tababarka Qaybta 3aad ee HUD (Xiriirka shabakadda)
Khayraadka Davis Bacon
Go'aaminta Mushaharka (Xiriirka shabakadda)
Foomka Mushaharka Shaqaalaha ee Waaxda Maraykanka (PDF)
Qodobbada Heerarka Shaqada ee Federaalka HUD Foomka 4010 (PDF)
Samaynta Davis-Bacon Shaqo-Hagaha Qandaraaslayaasha (PDF)
Xuquuqda Shaqaalaha ee hoos timaada Xeerka Davis-Bacon-Ogeysiis ku Qoran Shaqaalaha (PDF)
Gargaarka Dib -u -dejinta Labiska (URA)
Dulmarka URA (Website HUD)
Qorshaha Caawinta Ka-hortagga Barakacayaasha & Dejinta Meesha (PDF)
Foomamka Tusaalaha ee Hay'addaada
Kireynta Barnaamijka HOME (Erey)
GURIGA Qirashada Madaxbanaanida (Erey)
Liiska Hubinta U Qalmida Ardayda ee Guri (Erey)
Foomka HUD 2516 (Sare)
Barnaamijka HOME ee Gobolka Washington wuxuu galay kaalinta 1-aad ee qaranka!
HUD waxay bixisaa sawir qaadasho waxqabadyo waxayna darajaynaysaa awoodaha kaqeybgalka barnaamijkeeda (PJ) ee maamusha lacagaha HOME. Kuwani waa warbixinno wax-ku-ool ah oo saddex-biloodle ah iyo sannadle ah, kuwaas oo faa'iido u yeelan kara la socoshada horumarka PJ kasta, iyadoo la siinayo macnaha guud ee waxqabadyada barnaamijka, iyo in lala socodsiiyo dadka wax dooranaya in badan oo ka mid ah noocyada waxqabadyada ee lagu qabtay maaliyadda HOME.
Barnaamijka HOME ee Washington wuxuu uqortey # 1 waxqabad guud sanad kasta ilaa 2016. Washington waxay sii wadaa xoojinta bulshada iyadoo siineysa deganeyaasheeda guryo aamin ah oo la awoodi karo.
Si aad u aragto sawirka iyo darajooyinka warbixinnada, iyo guulaha kale ee HOME PJs, fadlan booqo websaydhka HUD Exchange halkan.